होलेरीमा “पानी फोटो”- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
होलेरीमा “पानी फोटो”
भाद्र २६, २०७६ काशीराम डाँगी
रोल्पा — केही वर्ष यता रोल्पाको होलेरीमा शान्ति केन्द्रित गतिविधि वृद्धि भएका छन् । अहिले यहाँ बम र बारुदको गन्ध विल्कुल छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडा भुल्दै होलेरी मात्र होइन, पूरै रोल्पाले शान्तिकालीन श्वास फेरिरहेको छ ।
त्यसैले बम र बारुदको बादल फाट्दै यति बेला रोल्पा र होलेरीमा शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको आकाश फराकिलो बनिरहेको छ । कुनै बेलाको द्वन्द्वग्रस्त यो भूमिमा यति बेला फिल्मकर्मीहरू आइपुगेका छन् । खगेन्द्र लामिछानेको निर्देशन रहेको फिल्म ‘पानी फोटो’ को होलेरीमा धमाधम छायांकन भइरहेको छ ।
‘पशुपति प्रसाद’ र ‘धनपति’ जस्ता सामाजिक धारका फिल्म निर्माण गरिसकेको टुकी आर्टस्ले द्वन्द्वकालकै कथामा ‘पानी फोटो’ लाई यहाँ छायांकन थालेको हो । यसअघि नाटकको रूपमा मञ्चन भइसकेको ‘पानी फोटो’ को लेखन निर्देशक स्वयंले गरेका छन् । ‘विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव देखाउन खोजेको हुँ,’ लामिछानेले बताए ।
उनका अनुसार उक्त फिल्ममा पन्ध्र वर्षअघि द्वन्द्वका कारण बेपत्ता भएको व्यक्तिको बाबुआमाको कथा समेटिएको छ । छायांकन गर्दा फिल्मको कथाजस्तै रोल्पाको गाउँ, बस्ती र पाखा पखेरा समेटिने उनले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण परिवारको प्रिय व्यक्ति लामो समय बेपत्ता हुँदा परिवारमा कस्तो अवस्था आइपर्छ ? परिवारले के भोगेको हुन्छ ? त्यसबाट समाजमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? फिल्मले खोतल्ने छ ।
यति बेला फिल्म युनिट दक्षिण रोल्पाको रुन्टिगढी गाउँपालिका आइपुगेको छ । केही दिन यहीँ रहेर युनिटले रुन्टिगढीभित्र पर्ने होलेरी बजार, खस्रे डाँडा, सैबाङ क्षेत्र, जौंलीपोखरी, दहवन, भांगोबारी क्षेत्रमा छायांकन गर्ने छ । सुन्दर प्राकृतिक क्षेत्रलाई चलचित्रमा समेटिए पनि कथा भने दुःखदायी हुने बताइएको छ । कथा तत्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ बाट रोल्पाको होलेरीबाट सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको प्रभाव सेरोफेरोमै केन्द्रित हुने छ ।
फिल्ममा अनुप बराल, मेनुका प्रधान, मलिका महत, खगेन्द्र लामिछानेलगायत मुख्य भूमिकामा छन् । प्रकाश घिमिरे, माओत्से गुरुङ, बुद्धि तामाङ, अजस्र ढुंगाना, कमलमणि नेपाल, आशान्त शर्मा, राधा श्रेष्ठ, श्यामकुमार खड्का, कमल देवकोटा, अनोज पाण्डे, अनिल पाण्डेलगायतको पनि अभिनय रहने छ ।
दीपक वज्राचार्य छायांकनमा व्यस्त छन् । निर्माण टोलीले दुईपटक आएर रोल्पामै छायांकन स्थलको सुनिश्चितता गरेका हुन् । कथाअनुसारको छायांकन स्थल र छायांकन स्थलअनुसारको कथा तयार गरिएकाले समय लागेको निर्देशक लामिछानेले बताए । उनले यस फिल्मले वास्तविक समाजको ऐना सार्वजनिक गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
छायांकन स्थल रोल्पामा छनोट गर्नुको कारणबारे लामिछाने भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात पनि रोल्पाबाट भएकाले छायांकन अन्यत्र गर्नुको खासै अर्थ छैन । त्यसैले हामी यहाँ आयौं ।’ फिल्ममा स्थानीय मगर समुदाय, उनीहरूको लय, भाका र भेषभूषा र संगीतलाई पनि समेटिने उनले बताए । स्थानीय संस्कृतिलाई फिल्ममार्फत् राष्ट्रियकरण गर्न सकिने उनको मत छ ।
गाउँमै छायांकन गर्न आँगनमै कलाकार आएपछि स्थानीय खुसी छन् । कलाकारलाई आफ्नैअघि भेटेका गाउँपालिकाका प्रमुख बालाराम बुढाले खुसी व्यक्त गर्दै होलेरीले शान्ति र प्रगतिको सन्देश प्रवाह गरेको दाबी गरे । भने, ‘तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा होलेरीमा कोही आउन सक्ने अवस्था थिएन । सबै डराउँथे । तर अहिले राष्ट्रिय कलाकारलाई ल्याउन सक्यौं ।’
यसअघि गाउँपालिकाकै आयोजनामा होलेरीमा बेग्लाबेग्लै समयमा विकास र अक्षर सम्मेलन सम्पन्न गरेका उनले शान्ति प्रक्रियापछि विकासले गति लिन थालेको बताए । फिल्मले होलेरी क्षेत्रलाई पनि चिनाउने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी जीएमले बताए ।
द्वन्द्व र होलेरी
दक्षिण रोल्पामा अवस्थित होलेरी तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको पहिलो निसाना गरिएको मुख्य स्थल हो । त्यसैले द्वन्द्वपछिको राजनैतिक चर्चासँगै होलेरीको चर्चा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको थियो । २०५२ फागुन १ मा तत्कालीन माओवादीले होलेरी प्रहरी चौकीमाथि पहिलोपटक आक्रमण गरेपछि चर्चा चुलिएको हो ।
विद्रोहीले पुनः २०५८ मा होलेरी प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा एक प्रहरीको हत्या गरिएको थियो भने करिब ७२ प्रहरी विद्रोहीको नियन्त्रणमा पुर्‍याइएका थिए । उक्त घटनालगत्तै सेना परिचालन गर्न खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । सेना परिचालन गर्न गरेको प्रयासमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समर्थन नदिँदा कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको थियो । प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ १०:११
इराकमा खसाल्यो ४० टन बम
भाद्र २६, २०७६ एजेन्सीहरू
बगदाद — अमेरिकी युद्धक विमानहरूले इस्लामिक स्टेट समूह (आईएस) को गढ मानिएको इराकी द्वीपमा ३६ हजार किलोग्राम (४० टन) बम खसालेको छ ।
अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले टिग्रिसको क्युनस द्वीपमा लेजर–निर्देशित ‘एफ–१५’ र एफ ३५ युद्धक विमान प्रयोग गरी बम खसालेको विदेशी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले जनाएको छ ।
राजधानी बगदादबाट उत्तरमा पर्ने सलाहेद्दिनको मध्य प्रान्तस्थित उक्त द्वीप सन् २०१७ मा आईएसले आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । त्यसयता इराकी सुरक्षा बल र अमेरिकी सेनाले उक्त क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन प्रयासरत रहँदै आएको थियो ।
मोसुलबाट ५० माइल दक्षिणमा पर्ने क्युनस द्वीप सिरियाबाट ‘आईएस’ लडाकुहरूका लागि ‘ट्रान्जिट हब’ का रूपमा रहँदै आएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ । गठबन्धन सेनाका प्रवक्ता कर्नेल माइलेस बी क्यागिसले बमबारीबारे ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘अमेरिकी वायु सेनाका एफ–१५ र एफ–३५ जेट विमानहरूले आईएस अखडा लक्षित गरी ३६ हजार किलोको बमहरू खसालिएको छ ।’
इराकी विशेष सुरक्षा बलको बटालियनलाई सिरियाबाट आउने लडाकुहरूबाट उक्त क्षेत्रमुक्त गर्न त्यता परिचालन गरिएको छ । इराकको मोसुल, मखामउ र किरकुट क्षेत्रमा सिरियाबाट आईएसका लडाकुहरू आउने गर्छन् ।
सेनाले सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत् सार्वजनिक गरेको भिडियोहरूमा बमबारी गरिएको क्षेत्रमा आगो र धुवाँका मुस्ला देखिन्छन् । ‘हामीले उक्त क्षेत्रको स्थायित्वका लागि विशेष संयुक्त टास्क फोर्सलाई सहयोग गरेका हौं,’ सैन्य गठबन्धनका मेजर जनरल इरिक टी हिलले भने ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ १०:०८